Olona dimy mianadahy niray petsapetsa no tompon’antoka ka vehivavy ny telo. Nangalatra tao an-tranon’ilay vazaha ny iray tamin'izy ireo nandritra ny fanasana natao azy ka hita tamin'ny "camera de surveillance" ireo nangalatra. Taorian'izay no niverina izy ireo hamono ilay vazaha. Naratra mafy ilay vazaha ary nanaraka fitsaboana teny amin'ny hopitaly.Taorian'ny fitoriana nataony dia voasambotra izy dimy ka fantatra fa sakaizan'ilay vazaha ny iray vavy tamin’izy ireo.
Efa manao fanadihadiana lalina mahakasika azy dimy mianadahy ireto moa ny mpitandro ny filaminana ka hiakatra fampanoavana tsy ho ela izy ireo.